usilika Aerial - uhlobo isekisi ubuciko, kamuva eyabizwa zisetshenziswe ifomu lula e ukuqina. Zimelele ezimbili emapheshana lendwangu ukuthi anamekwe iphuzu elilodwa ezingeni ukuphakama hhayi ngaphansi kuka 6 m. Air emidwebweni ukuvumela umculi ukugibela phezu kwabo ukwenza ukusonta visy nezinye amaqhinga, kuhlanganise amawa umbukwane futhi iyingozi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngale hlobo lobuciko, elibangela injabulo futhi usizi aba nalo lapho ezethamelini, sizoqhubeka. Futhi ukwabelana izimfihlo kanjani ukwazi ukujoyina ngayo ingozi omncane.
Lena enye yezinhlobo ezingu entsha Amathrendi esekisini ubuciko. Umsuka walo ingatholakala ejimini, okuyinto kwenziwa kusesimweni yokumiswa phezu ibhande. Wayeqale uvele ekhulwini XVII e China.
Kodwa acrobatics zasemoyeni ayengase avele kuphela XX leminyaka, lapho yasungulwa zokwenziwa nendwangu - impahla ebukeka lula, ukusakaza enhle, zingenziwa yini umbala, okubaluleke kakhulu, ungakwazi ukumelana isisindo umuntu ngaphandle ingozi Ukubhidliza.
Umsuka esiqondile nothayi banamuhla lokhu art kunzima ukulandelela. Ngokusho ezinye izicelo, kwabonakala ngo-1959. Ukuze abafundi a izikole isekisi French wabekwa umsebenzi onzima - ukwenza inani elingavamile futhi eziyinkimbinkimbi. Omunye ababethweswa iziqu ethulwa acrobatics at eziphakeme, usebenzisa usilika zasemoyeni.
Nokho, nakuba lo mbono ayizange ubanjwe on.
Ukuthuthukiswa zezimbali art
Ngo-1987, phambi André Simard, a athlete kanye isekisi umenzi, kube nenkinga efana le nkinga ye-French umfundi-tsirkachki. Wayesanda waqala ukusebenzisana yakhe Cirque du Soleil, kanye nobuholi obuphethe esebeké phambili izidingo zawo - baziqambela into entsha ezokwenza umxhwele izilaleli. Kuyinto ongaziwa ukuthi inkulumo ka-Andre 1959 zaziwazi amakhono kodwa umsebenzi bomzimba Chinese wayazi (ngokuvumelana ukusebenzisana naye ngesikhathi ozakwabo). Kunoma ikuphi, singasho ukuthi nguye kuqala luphumelele kasilika zasemoyeni njengoba manje bamukeleke ubuciko esekisini. Andre Simard wathi acrobatics enjalo kumkhumbuza izindiza wakhe ngephupho, kodwa okungokoqobo. Babalelwa ku-1995 nezindinganiso ezithile (ukuze Cirque du Soleil watjengisa kakade umbukiso entsha emhlabeni wonke) kuye kwamiswa. Futhi, ukukholisa nozakwethu ukuthi umoya yokuzijwayeza phezu imidwebo kufakwe ohlelweni lwezifundo lwazo zonke French isekisi esikoleni ngo-1996, Zherar Fazoli, le acrobat abadumile French.
Yiqiniso, ukuhlathulula ngamagama isekisi nzima. acrobatics Aerial lisikisela ukuthi umculi ukhwela webs eside zazo eqondiswa Dome isekisi ezingeni ukuphakama 6-15 m. Emva kwalokho, phakathi kwakhe ukuwa has kuphela amandla akhe, ukukhuthazela nokushesha. Ayikho umshwalense akunakwenzeka - umlingisi kungaba ukugaxela futhi ucishe ke.
Uma sithole ukuphakama kudingekile, isekisi iqala ukwenza ezihlukahlukene izakhi - torsion, amasu okugumbuqela imibuso, unyakazisa, ohambweni amancane, ezahlukene izinhlobo Twine. Ngokuvamile ekupheleni izinombolo umlingisi izikhathi eziningana swathes sendwangu umzimba bese idedela ke, kokwenza iconsi ekhungathekisayo. Okwamanje zokugcina eqeda ke, futhi ephethe indwangu. Lona into eyingozi kakhulu futhi umbukwane zohlelo.
Indwangu kuyiphi usilika zasemoyeni - kuyinto chiffon, i-polyester, inayiloni nezinye izinto kanzima. Kufanele nakanjani babe inelastic ukuba isekisi ungase abalawula ukuhamba kwayo. ububanzi Web ngokuvamile incike Ubukhulu umdwebi. Ukuze abesifazane namadoda isilinganiso uhlobo umzimba 1.5-2 m, ngoba amadoda amakhulu - 2.5-2.8 m ububanzi Ukukhetha imithetho zimi kanje Indwangu kufanele kube ebanzi ngokwanele ukuba bopha indikimba umlingisi :., kodwa Laliphelela e ababebuthene.
Izitatimende eyenziwe ukuphakama futhi ngaphandle umshwalense - kuba njalo usengozini. Abaculi basengozini falling, okungase kubangele nokulinyazwa, contusions, waphuka, ukulimala kwezitho ezingaphakathi, r. H. ukopha, ukukhubazeka noma ukufa.
Ukuqeqeshwa ngokwayo kungaba nemiphumela ebuhlungu: ukulimala isikhumba ukuzihlikihla esiyilwa njalo Indwangu, Ukwenyela, amagciwane kanye muscle ukulimala ngenxa umthwalo ngokweqile, isiyezi kanye nesicanucanu kusukela torsion futhi ukuphakama.
Omunye izinhlobo amahle kakhulu futhi ngokuba yingozi kwezinkolelo-isekisi ubuciko - akulona ihaba ukusho mayelana usilika zasemoyeni.
Ukuqeqeshwa kufanele iqhutshwe kuphela nokugcina okuqinile mithetho yokuphepha kanye bawuhloniphe ngokuqinile ofundisa isiqondiso.
Ngaphezu kwalokho, amakamelo eyayibamba ukuqeqeshwa kufanele kuhlolisiswe njalo izikhungo accredited ukuthi uhlole Isisindo esikhulu zingamelana lendwangu axube.
Kuthiwani uma ufuna fly kakhulu beqaphile, kodwa ungafuni bazichaya izingozi ngokweqile? Air yokuzijwayeza phezu emidwebweni e inguqulo lula isiyatholakala hhayi kuphela yabadlali Olympic professional isekisi abadlali. Abaningi ukuqina studio ukufundisa endaweni ezithakazelisayo acrobatics, noma uyifake phakathi indinganiso Uhlelo izakhi yoga noma ezinye izindawo ukuqeqeshwa. Amakilasi aphethwe kasilika zasemoyeni at kokuwa ongaphakeme, okuyinto enciphisa ubungozi umonakalo (kodwa akusho uziqede, nemivimbo Ukwenyela ingatholakala, futhi ewa 1 imitha).
Ukuze uqale ukuqeqeshwa, akusho ukuthi ukuba ukuma ngokomzimba ephelele - amazinga kokuqala zenzelwe nje Wabasaqalayo in yokufaneleka jikelele, kuhlanganise nalabo ukhuluphele. Kodwa amakilasi owengeziwe ukuze uqinise izicubu izingalo kanye nabezindaba ukusiza kuphela ukufeza imiphumela engcono ngokushesha.
Ungakhohlwa ukuthi lokhu kuyinto umdlalo okukhulu, ngakho 4-6 emasontweni okuqala ukuqeqeshwa uzobe asemikhumbini zonke muscle entendeni embozwe calluses. Kodwa uma ubheka ifomu buthuntu futhi ephumelelayo umzimba, kufanele sizame yokuzijwayeza zasemoyeni.
Amazinga athletics - ezikoleni nezemidlalo enkulu yesikhathi futhi ibutho
Iwayini 'Agdam ". Umlando omfishane ukusetshenziswa
Ubani umbusi wokuqala waseRoma?